Impazamo yesikhombisi, iBentley V8i -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Iphuso lesilawuli, iBentley V8i
Ndiyifinyelele kwi-Series Series 1 ye-PowerMap V8i (8.11.05.19) ezisa iindaba ezithakazelisayo.
IPowerMap, njengePowerDraft kunye nePowerCivil ayihlali kwilayisensi yeMicrostation, kodwa ibandakanyiwe njengeXesha lokuSebenza ngexabiso eliphantsi ngokuthelekiswa neBentley Imephu + iMicrostation. Ke iyasebenza ngokungathi sisicelo esenziwe nguwe kwi Microstation API, ngayo yonke imisebenzi ngaphandle kokuba ayizukuqhuba kule nkqubo yeBentley enje ngeGeopak, iDescartes, njl.
Phakathi kwezona zinto zintsha ezinomdla lutshintsho olwenziwe kwisikhangeli, esifana kakhulu nokubonisa okuqhelekileyo kwitheyibhile, kodwa ingaphezulu koko, kuba kunokwenzeka ukuhlela iimpawu kwiibhloko (ukuhlela iigridi), ukugcina ukukhangela kunye nezinye izinto. Ikwajongeka inomdla, nangona ndingekavavanyi okwangoku, enye indlela yokunikezela izinto ngaphandle kokuzakha.
Phakathi kwezinye izinto ezithandekayo zikhankanywe:
Umanyano wetafile (ukudibanisa), kubandakanywa izakhiwo ze-xml kwi-dgn
Ukwahlula / ukudibanisa iipolgoni kunye nenketho yokufumana ifa
Ingxelo yohlalutyo lwezinto eziphezulu. Ngoku, iziphumo zokuwela okanye ukukhethwa kweempawu zingathunyelwa njengengxelo kwaye ziboniswe kwi-Browser Data.
Ukubhaliswa, ngokusekelwe kwiiNkcukacha zeMpawu.
Ukuguqulwa kwamabhali aguqukayo kwizichazi ezingunaphakade.
Zonke ezi zinto zidala kwezinye iinkqubo ze-GIS, kodwa ke, siyakwamkela.
Ukususela ekuqaleni, impazamo yabonakala:
Ngaphandle: Ifayile 'C: \_ WINDOWS \_ Cursors \_ hcross.cur' ayifumanekanga.
Okomzuzwana bendicinga ukuba kungenxa yokuba andizifaki ezi zinto zifunwayo, kuba besele ndifakelwe iMicrostation V8i, kodwa xa ndiyenzile, ndiyabona ukuba kuphela yiXML Parser 6 evela kwiNkonzo Pack 1 kunye neDirectX 9c ehlaziyiweyo. Ke ndiphela ndikholelwa ukuba luhlobo lwesikhombisi esingafakwanga iWindows yam.
Ukuze uyisombulule, vele uye kwifolda C: \_ WINDOWS \_ Cursors \_ kwaye wenze ikopi yesinye seziphambano zomnqamlezo, uyiqambe kabusha njenge-hcross.cur
Ndilungile, ngenxa yesi sizathu sosizi inkqubo ayindivumelanga ukuba ndisebenzise umbono. Ndizakube ndidlala, ukubona ukuba siyehlisa na umgangatho wokuqhelaniswa nesifundo esifanelekileyo esinyathelo-nge-nyathelo, kwiprojekthi yokudityaniswa kweCadastre kunye noCwangciso lweDolophu oluye lwandithoba iintsuku.
Ndiya kuthi kuni, mhlawumbi ndiza kubuya kwizixhobo ebezikho phuhliswe kwi-XFM kwi-2005, kodwa ngokusetyenziswa kwesiqhelo.